भारतीय प्रहरी पोशाकसहित दैलेख सदरमुकाममा घुम्दै ! – Life Nepali
भारतीय प्रहरी पोशाकसहित दैलेख सदरमुकाममा घुम्दै !
दुल्लु २०७६ चैत ०४ गते । चो’र प’क्राउ गर्न भनी भारतीय प्रहरी पोशाकसहित सोमबार साँझ’ दैलेख सदरमुकाममा आएका छन्। दैलेखकै एक युवकले भारु ५० लाख चोरी गरेर दै’लेखमा आ’एको भन्दै खो’जतलासीका लागि पो’शाकसहित भारतीय प्रहरी सदरमुकाम आइपुगेका हुन्। आज बिहान पोशाकसहित जिल्ला सद’रमुकाममा नि’स्फिक्री हिँ’डिरहेका भारतीय प्रहरी पो’शाकसहित जि’ल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखमा गएका थिए। दै’लेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटे’लले अहिले सोही वि’षयलाई लि’एर छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
भारतीय प्रहरी स्थानीय’ प्रशासन र प्रहरीलाई’ कुनै पनि जा’नकारी न’दिई दै’लेख आएको पा’इएको छ। उनीहरुले बिहान मात्रै जिल्ला प्रहरी’ कार्यालयमा आ’फूहरु दै’लेख आएको जानकारी गराएका थिए। भारतीय प्रह’रीका सई विजय विवे’कको नेतृत्वमा तीन प्रह’रीसहित चार ज’नाको टो’ली दैले’ख आएको हो। भारत, हरि’याणा प्रदेश यमुना नगर जि’ल्लाबाट तीन प्र’हरीसहितको चार ज’नाको टो’ली दै’लेख आ’एको जिल्ला प्र’हरी का’र्यालय दै’लेखका प्रहरी नि’रीक्षक उपेन्द्र’प्रसाद आ’चार्यले जानकारी दिए।
भारतमा काम गर्दै आएका दैलेखका एक युवक झ’ण्डै रु ५० लाख चो’री गरी फ’रार भए’पछि खो’जी गर्न दै’लेख आएको भारतीय प्रहरी’ले दैलेख प्रहरीलाई’ जानकारी गराएका’ छन्। “उनीहरुले पो’शाक’ लगा’उनु हुँदैन’ भन्ने थाहा’ नभएको बताएपछि हामीले सादा पोशाकमा हिँड्न भनेका छाैं,” प्रहरी निरीक्षक आचार्यले’ भने, “भारतीय प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले निय’न्त्रणमा लिएको छैन, उनीहरु हाम्रो सम्पर्कमा आफैँ आ’एका हुन्।” प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेश हुँदै सदरमुकाममा भारतीय प्रहरी सूचना र अनुमतिविना’ नेपाल आउनु ‘आप’त्तिजनक भ’एको नेपा’ल मजदूर किसान पार्टीका जिल्ला कमिटी सचिव लक्ष्मी विकले बताइन्। रासस
Previous ललिता निवास प्रकरणका पौडेललाई थुनामा पठाउने आदेश
Next काठमाडौं उपत्यकाका यी स्थानमा लगातार ४ दिन बत्ती नहुने !